lacagta Swedish | guide currency.net A iswiidishka si ay u iibsadaan lacagta qalaad ee bucshiradaha iyo adeegyada dhoofinta
Home lacagta Swedish RSS
Lacagta The Swedish
lacagta The Swedish(kroon) ayaa qadaadiic ah ee Sweden tan iyo 1873. Waxaa la soo saaray bangiga qaran ee Sweden, Sveriges Riksbanken. In English, qadaadiic la qabsiyada si dadban ula lahaa sidii taaj oo Sweden (Kroon tilmaamaysaa taaj ee Swedish). Mid ka mid ah kroon waxaa kala qaybsanyihiin 100 dinaar. Si kastaba ha ahaatee, qadaadiicda oo dhan öre ayaa ganaax ku maqan sida of September 30, 2010. Products ayaa weli lagu qiyaasay in öre, si kastaba ha ahaatee marka lacag bixinta oo dhan isku celceliyo waxaa laga beddelo si kroon ugu dhow. Qadaadiic hadda la heli karo si loogu isticmaalo waa 1 kroon, iyo 5 iyo 10 taajaj. Daabacaada lacag ku jiraan qaybaha of 20, 50, 100, iyo 500 taajaj.
Sweden ayaa dhammeeyo hab faa'iido nolosha, sababtoo ah jarida laayeen ganacsiga gaarka loo leeyahay, Faa'iidooyinka bulshada ballaadhan, ah qaabka faafinta sare, iyo awood shaqo weyn tayo leh. dhaqaalaha waxaa si aada sugan in sarrifka ka baxsan, isticmaalaya saldhig hantida alwaaxda ah, hydro awood, iyo macdanta birta. Xaaladda degdegga ah ee dunida oo dhan dhaqaale ee 2008 hoos u xiiso rakaab iyo isticmaalka, keeno ku saabsan dhaqaalaha Swedish in ay simbiriirixan galay gurasho habase yeeshee lacagaha ay adag iyo daruuriga asaasiga ah. Xirfado iib adag ku daray in ay dib u soo booda adag dib sannaddii 2010 in 2011.
lacagta The Swedish ayaa lagu soo bandhigay in 1873, supplanting Riksdalersgatan ah. lacag caddaan ah ayaa la soo bandhigay sida aftereffect ah Scandinavian IMF Midowga la Norway iyo Denmark, kaas oo la dhigaa socday ilaa Dagaalkii Adduunka. Foomamka IMF hoos gorgortan ah ka hooseeyeen heerka ugu fiican oo tayo leh. Midowga IMF ayaa ku dhameysatay la haya-up of Dagaalkii Adduunka ee 1914. Sweden dhiibay heerka tayada sareeya on August 2, 1914, oo aan qiyaasta ah bedelo doorsoon ururka gaaray dhamaadka ah.
By gorgortan, Sweden waxaa loo baahan yahay in ay ku biiraan euroda iyo hadaysaan in isticmaalka Euro ah. Noqo in sida ay laga yaabaa in, Dalka Iswiidan ugu soo horjeeda qaata September coin.On ah 14, 2003, konton iyo lix boqolkiiba cod-kii soco baxay diiday helo Euro ah. Dhexxda burburin baxsado, Dowladda Sweden ayaa soo gaaray in aan ku biiro ERM II, shardi ah in la helo Euro ah.